Tsy ampoizina ny ataon’Andriamanitra
"... hampihendratrendratany ny firenena maro. " Isaia 52:15
"Ary nony efa vitan’i Jesosy izany teny izany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany. " Matio 7:28
Tian’ny ankizy erỳ ny tsy nampoizina, fa matetika ny olon-dehibe tsy dia mankasitraka loatra. Tiany hiseho araka ny naminavinana sy naniriana azy ny zavatra rehetra. Marina tokoa fa misy indraindray zava-dratsy tsy nampoizina : filazana loza, aretina… fa misy koa zavatra tsara tsy nampoizina.
“Andriamanitra dia tsy ampoizina mandrakariva, mahagaga mandrakariva”, hoyi André Frossard. Manalavitra an’Andriamanitra ny olona sasany, satria tsy manampo sy mitolagaga manoloana ny asany ; misy hafa kosa misokatra amin’ny finoana ka mitsaoka, tahaka an’i John Newton, namorona ilay hira malaza hoe “Amazing grace”: “Fahasoavana mahagaga!... Jamba aho teo aloha, fa mahiratra ankehitriny!”
Fahagagana noho ny fiovam-po rehefa mitodika amin’Andriamanitra. Matetika isika no latsa-dranomaso, mahita izay niafina tamintsika hatrizay.
Fahagagana, mandritra ny androm-piainantsika : indraindray rehefa mahita ao amin’ny Baiboly andininy mbola tsy voamarika mihitsy, indraindray rehefa mahita ny valim-bavaka avy amin’Andriamanitra, izay samy tsy takatry ny saina ary mitaona antsika hitsaoka Azy.
Ny fiainana kristiana dia lalana misy zava-tsy nampoizina sy zava-baovao. Lalana ianarantsika amin’ny fomba marobe, hahafantatra ny fitiavan’Andriamanitra, lalana “toy ny fipoak’andro maraina, izay mihamazava mandra-pitataovovonan’ny andro” (Ohabolana 4:18)… lalana mahatonga antsika hanakaiky bebe kokoa hatrany an’Andriamanitra.